कुन कुन सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु हुदैन त ? « Sansar News
कुन कुन सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु हुदैन त ?
७ माघ २०७८, शुक्रबार १५:५८
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक कामका लागि सञ्चालन हुने र तोकिएका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नहुने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । आज राति १२ बजेदेखि जोरबिजोर नम्बर प्लेटको आधारमा सवारी सञ्चालन गर्र्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयमा केही अन्यौल देखिएपछि आज पुनः विज्ञप्ति जारी गरी थप स्पष्ट पारिएकोे हो ।